ट्रान्सफर्मर प्रकरणका “दोषी” सित बयान सुरु – Sourya Online
ट्रान्सफर्मर प्रकरणका “दोषी” सित बयान सुरु
सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १ गते २:०५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका दोषी कर्मचारीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको छ ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा परेको उजुरीलाई अख्तियारले बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेकै बेला दोषी कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा ६ जनासँग बयान लिइएको छ । अख्यितार स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी भन्दै छानबिनका लागि पठाएका ३३ बहालवाला र पूर्वकर्मचारीमध्ये बहालवालासित बयान लिइएको छ । बाँकीसित पनि क्रमश: बयान लिइने अख्तियारले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका विद्युत् पौडेल, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, मनोज बराल, सुरजप्रसाद साह र निमेषकुमार पोखरेलसँग अख्तियारले आइतबार बयान लिएको हो । गत भदौदेखि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । ०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक थाइल्यान्डमार्फत खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका उनीहरूसँग बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमै छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भन्दै छानबिन सुरु गरे पनि त्यो असफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यतिबेलासम्म प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर अनियमितताबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनका साथै आन्तरिक कारबाही प्रक्रियाको अवस्थासहित जानकारी दिएर छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तैपनि, अख्तियारले छानबिनमा खासै चासो देखाएको थिएन । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की आएपछि दोषीसित बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
०६४ देखि ०६८ सालसम्म खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेश काºले र डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिले दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले अर्का सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले गत भदौमा दिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक एवं हालका महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, अहिलेका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, महाप्रबन्धकद्वय चिरञ्जीवी शर्मा र उपेन्द्रदेव भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम विसी, पूर्वमहाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज, युगलकिशोर शाहलगायत बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित ३३ जनालाई दोषी देखाइएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक यादव, महाप्रबन्धकत्रय श्रेष्ठ, पौडेल र भट्टका साथै अन्य कर्मचारीसँग समेत बयान लिने तयारी भइरहको छ ।
प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिनले भने गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका तत्कालीन कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्य तीन महाप्रबन्धक र कर्मचारीसँग बयान लिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल आएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण छानबिनको जिम्मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अख्यितारलाई दिएको थियो ।
चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्किएको थियो । अझ जेके होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड चीनद्वारा नेपाल आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरको बाहिर र भित्र दुवैतर्फ आल्मुनियम भएको पत्ता लागेको थियो ।